Alexander Feklistov: Filmography, Biography uye upenyu pachako
Vazhinji, achiona anoshamisa mutambo ari mutambi pachikuva kana paTV, funga pamusoro worudzii munhu ari mutambi muupenyu chaihwo? Chii chaanoita, uye chii vanhu vakamupoteredza? Mumwe wevaya vatambi vane mararamiro ichifarirwa vaoni vakawanda, ndiyo Feklistov Alexander. Biography, Filmography, zvinonakidza zvinhu uye Zvikamu paupenyu ichi chinoshamisa mutambi vakaungana munyaya ino.
Actor Alexander Feklistov akaberekwa Leningrad muna 1955, musi 7 December. Kuchikoro, Alexander akapinda muna 1963. Vabereki vake uye mukoma wake akanga akarerwa zvakaoma kwazvo, kubva pauduku vakaroverera kuda kuitira uye akadzidzisa kuti tirambe kurangwa. Baba aida vana kugona sayenzi chaiyo, uye akaona kuti vakanga kuverenga akakodzera mabhuku. Pataikura, mukoma wangu Alexander akava programmer, ukuwo mutambi pachake akava Alexander Feklistov. Mhuri yakanga pakutanga pamusoro basa Alexander, kunyanya baba vake, asi zvino ndaneta vachirwa maonero mwanakomana, vakamupa kusarudza zvose pachake. Asi pashure baba vake vaidada mwanakomana wake, achitarisa mharidzo yake yemitambo uye cinema.
vabereki Alexander Feklistov
Amai Alexander akaberekwa muna Ivanovo, akadzidziswa panguva College of Textiles. Uye gare gare akashanda somunhu injiniya-mukoti. Asi baba aAlexander akaberekerwa Donetsk uye akanga ari muchiuto. Vabereki vake vakasangana panopera hondo, ndokudzokera kuti mugumo zvavakange vagadzirira musangano muguta Klaipeda. Vakabva vatamira Leningrad, apo baba vake Alexander pachako kupedza chirongwa kuchikoro, izvo kudzidza kuchikoro haana hondo kurega. Uye pashure apinda chikoro yakafanira Budennyi, muna Leningrad. Vanowanzoororwa kutorwa kumba shamwari uye co-workers varwi. Alexander Feklistov anoyeuka zvakanaka chaizvo zvose izvi inodziya misangano uye kuungana.
Personal upenyu Alexander Feklistov
private ukama hwavo anoedza kwete pachena kuratidza mutambi Alexander Feklistov. upenyu hwake pachake ari chakavanzika vakawanda. Zvinonzi chete anozivikanwa kuti mutambi akaroora. zita romukadzi wake ndiro Elena, kunoshanda paTV, asi kwete mutambi, asi somunhu Economist. Vane vana vatatu chinoshamisa: vanasikana vaviri uye mumwe mwanakomana. Uyewo, makore mashoma apfuura, Alexander akava sekuru. Imwe nhengo yemhuri yake uye ari kufarira imbwa, mongrel Nyusha.
Alexander akatanga kuita upenyu Feklistov 70-ies wekupedzisira remakore. Iye serendipitously akauya kushanda yemitambo Studio, Vyacheslav Spesivtseva. Ari Studio Akashanda 6 years. Uyewo munguva 1975-1977. iye aibatanidza basa uye yokudzidza Moscow Pedagogical Institute panguva rorusununguko Defectology.
Kamwe iye chabva Spesivtseva gore rose aisagona kupinda chero yunivhesiti munhandare muMoscow. All akanga amboramba rubvumo. Nemhaka kutsungirira uye kushivirira yemberi mutambi pagore, iye achiri yarova Moscow Art Theater School. Chipangamazano cheboka rake raiva Oleg Efremov. Iye akagadza zvakawanda mune kumawadhi avo. Alexander kudzidza Feklistov chikoro ichi muna 1982.
Basa Aleksandra Feklistova yemitambo
Apo Alexander Feklistov apedza zvidzidzo zvake pa Moscow Art Theater School, akakumbirwa kugara ikoko, uye akabvuma. Saka, kubva 1982, akashanda ari Moscow Art Theater. Chaizvoizvo, hwake hwose upenyu hwakada chokuita Studio ichi uye akasangana vanhu ikoko.
Muna 1989, Alexander Feklistov vakatamira "Munhu" Studio. Pano hazvina refu kunonoka, uye pashure vaviri makore pamwe nevatsigiri vake akavamba 5th Moscow Art Theatre. Akabva aishanda dzemitambo siyana. Izvi zvaisanganisira:
Chinoshamisa chepanzvimbo Agency "Bogis" umo mutambi yaishanda 1993.
Art Theater, umo Alexander akabatana 1997.
Muna 2001, Alexander Feklistov akarega kubva troupe of Art Theater.
Basa Aleksandra Feklistova pamwe Romanom Kozakom
With Romanom Kozakom vadzidza pamwe chete Moscow Art Theater School. Mune ramangwana, takaramba kushanda muna Moscow Art Theater. Aleksandr Feklistov aiva mutambi, uye Roman Kozak - wekambani uye unyanzvi mutungamiriri. Roman nokuti Alexander ndomumwe yapedyo zvikuru vanhu okusika. Team Romana Kozaka akasangana mushure anoratidza "Gold" iyi inoshamisa rutivi kuenda uye Alexander Feklistov. With Romanom Kozakom ivo akasika pamwe kupfuura chimwe chirongwa. In nezvinobvamo dzakawanda Roman Alexander akanga zvakananga nidzwa.
Alexander Feklistov kushanda firimu
Started Aleksandra Feklistova zvikuru kubudirira firimu. Mugore rokutanga aiitawo ari kupfura pakati mafirimu matatu. Uye yaakatanga basa raiva Doronin mufananidzo kubva firimu "Troop" (1984). Uyezve, zvegore, wakauya firimu rake "rubatso" uye "yakanakisisa mugwagwa hwedu."
In kufirimu ari mutambi yakanga filmed zvikurukuru repertory vachizvikwidziridza. vatambi vake zvarongwa firimu kuonekwa pakarepo, zvichiita chiedza, pakubika, uye sezvinoita pakarepo kunyangarika. Iye akasiya ake vateereri kuyeuka uye nefemero. vatambi vake havana nguva kuwana kufinhikana.
Uyewo, Alexander Feklistov starred ari wepaterevhizheni. Asi basa mumafirimu akadaro anofunga chinonetsa. Handiti, hapana nguva yokudzidza manyorero uye chinyorwa chake, saka unofanira kurangarira zvose chaizvoizvo parwendo. Uye nokuda kushaya nguva zvakaoma kupinda mufananidzo gamba rake. Alexander FEKLISTOV vanosarudza chinoshamisa chepanzvimbo basa pane firimu. Uye ake kufarira chaizvo basa mufananidzo Boris ari kutamba "Boris Godunov."
Mumakore achangopfuura, kupfuura mbiri basa raiva firimu "inogarwa Island", "Doctor kuti Diary", "kwete kufanana nevamwe", "matchmakers." Dzinoti "Matchmakers" iri kudiwa, uye kwava kubva 6th mwaka. It Aleksandr Feklistov uye Lyudmila Artemyev vatambe vachidziripira.
Filmography Alexander Feklistov
Vanopfuura 100 mabasa mumafirimu uye wepaterevhizheni taitamba Feklistov Alexander. Filmography yake sezvinotevera:
1983: Krylovich muchinangwa firimu "Partners."
Doronina Konstantina muchinangwa firimu "yokuzviparadzanisa";
"The nzira yakanakisisa muupenyu hwedu."
Mr. Hyde muchinangwa firimu "Chiito Nyaya Dr Jekyll uye Mr Hyde";
Sajeni Elyutina vaitambira yepaTV "The battalions vanokumbirwa kuti moto";
Shubnikov mufananidzo mu TV 'woga. "
Sasha muchinangwa firimu "Summer chiitiko";
Gray muchinangwa firimu "Plumbum, kana The Ngozi Game."
Victor Prosvirnyak mufananidzo ari firimu "Shura uye Prosvirnyak";
Paul muchinangwa firimu "Munda zvaidiwa".
Herman muchinangwa firimu "... Ava kuhwina makadhi matatu";
Anatoly basa firimu "Fathers";
Sandro muchinangwa firimu "A mutambo Bheshazari, kana Night pamwe Stalin";
mufananidzo chiremba Leo Paton ari firimu "Rudo uye Ropafadzo";
"Process" Zhiltsova muchinangwa firimu.
Vadim muchinangwa firimu "Broken Light";
Viktor Ivanovich airidza mudzidzisi ari firimu "Zvidzidzo mukupera chitubu";
firimu "Late Autumn".
basa murayiridzi enyika weboka iri firimu "Wind akadzokera";
Alexander Vasilyevich mufananidzo mu firimu "Anna Karamazov";
basa Minister Bolshakov cinematography mu firimu "The Circle Inner";
Polyakova muchinangwa firimu "Red Island";
"Bus," pfupi firimu.
basa wefizikisi mu firimu "Mangwana";
cooperator muchinangwa firimu "Zvinoita refu akaonekana navo";
mufananidzo Boris Ivanovich mu firimu "Luna Park";
Sasha muchinangwa firimu "kupaza";
Nikolaev mufananidzo mu firimu "Stalin".
Mityaya muchinangwa firimu "Vana Gods Iron";
Lopakhin muchinangwa firimu "The Cherry Orchard";
basa Muoni ari firimu Russian Ragtime ".
Mitya muchinangwa "Moscow nousiku";
firimu pfupi "Kursk Funk";
firimu "Gore Dog."
Aleksandra Griboedova muchinangwa TV "Griboyedov Waltz";
photoplay "The Man chomutemberi".
1996: yepaTV "Madzimambo Russian Detective."
nzira kweVhangeri dzinoti "pa loggerheads";
dzinoti "Chekhov uye Co".
basa Dr. Platon Alekseevich dzinoti "Zindoga Petersburg zvakavanzika";
Borihina dzendege vaitambira yepaTV "Birthday Bourgeois";
Vadim Kulkova mufananidzo mu "Dossier mutikitivha Dubrovsky";
almanac "chinosekesa waunoda?".
basa Petra Arkadevicha Stolypina dzinoti, "Empire ari pasi kurwisa";
airidza munyori Sergei mu firimu "Shanje vavanaMwari";
Polyakov muchinangwa firimu "Mune August 41 ndipo";
mufananidzo Andrew mu firimu "Own Shadow";
Sergei muchinangwa firimu "21:00";
firimu "Rudo kusvika guva";
firimu "Home kuti vapfumi."
mufananidzo Borihina dzendege dzinoti "Birthday Bourgeois-2";
basa Boris Anatolyevich chiremba ari yepaTV "Akanyumwirwa";
Aitambisa Aleksandra Suvorova dzinoti "The Fifth Corner";
Mesyatsev basa firimu "aval";
firimu "August yechi44".
"Red denga. Black Snow ";
"Kuti kuwa kumusoro."
Vladimir Solovyov muchinangwa yepaTV "Kamenskaya-3 ';
firimu "Tabloid Cover".
Aleksandra Dobrynina muchinangwa firimu "chete You ';
Shantorskogo mufananidzo ari yepaTV "Chisarai ungira";
Lva Davydova muchinangwa firimu "Apokirifa: Music Petro naPauro";
Prince Rotovita muchinangwa firimu "The Legend pamusoro Kashchei".
TV presenter muchinangwa firimu "Mama, usanetseka-2";
Svechkina mufananidzo ari yepaTV "Full nokukurumidza mberi!";
Molotov muchinangwa yepaTV "Star of yaitonga."
Major Basa Ivan dzinoti "Vafambisi Tango";
Mishakova mufananidzo ari yepaTV "kuroyiwa nzvimbo";
basa Yu ari multi-firimu "Diamonds murenje";
Ershova Eduarda muchinangwa firimu "Flowers nokuda Snow Queen";
Alice murume muchinangwa firimu "Chinhu chikuru - kuti nguva";
baba Alice wakaita ari yepaTV "Kodzero Mufaro";
Makwana mufananidzo gwatya mu firimu "Bomzhiha";
Dmitry Sergeyevich muchinangwa firimu "The Snow Maiden akura mwanakomana";
mufananidzo Dimycha tekisi mutyairi ari melodrama "aienda-yakazonyorwa";
Colonel Ryumin vaitambira yepaTV "Urayai nyoka";
"The Price ndiyo Death."
Mukhin muchinangwa firimu "Vakafa Mweya";
mufananidzo yoruwa firimu "Padenga kwenyika";
basa chiremba mukuru Mountain ari firimu "Day nedoro";
Vladislav Zatsepina mufananidzo mu "bindu";
vamwene akaita mu firimu "kugarwa Island";
dzinotevedzana dzinoti "General Mwanasikana - Tatiana".
basa-law mu firimu "rinogarwa Island. Real ";
mufananidzo Petrovich mu "The Trip";
basa gwatya Kohli mu "Bomzhiha-2";
Avdeeva muchinangwa yepaTV "Big Oil. Mutengo Kubudirira ";
mufananidzo Vladimir Barsukov mu firimu "Kate. Military kare ";
baba Mitrofanii vaitambira yepaTV "Pelagia uye White bulldog";
Gleb Sergeyevich mufananidzo mu firimu "Petersburg Holidays";
Kiseleva Nikolaya basa dzinoti "ndichadzoka."
Iye wakaita basa guru yemapurisa iri yepaTV "Nhema Kwechokwadi pasi";
mufananidzo Dhiyabhorosi ari "kuedza";
Antonova Valeriya Ivanovicha muchinangwa yepaTV "ndauya kuzosangana newe";
mufananidzo Mickey mu firimu "inotonhorera vakomana";
Lopakhin muchinangwa firimu "Rufu mu Pince-nez";
dzendege Rogov vaitambira yepaTV "Dance ermine";
mufananidzo Dhiyabhorosi ari firimu "kupondwa";
"Ndimi aniko, Va Ka?";
"Munhu wose ane chake hondo."
2011: Alexander Berkovich muchinangwa yepaTV "Matchmakers-5."
Fedotov muchinangwa yepaTV "Yalta-45";
Zaitseva Ilya Ilyich vaitambira yepaTV "Doctor kuti Diary";
"Doctor kuti Diary 2";
"Regai kuva kufanana vose."
2013: Alexander Berkovich muchinangwa yepaTV "Matchmakers-6."
Mibayiro uye mibayiro Alexander Feklistov
The mutambi wakapata chaizvo yakasiyana yemitambo nezvinhu uye nemafirimu. Ane basa rakadaro uye pakawanda, izvo hazvishamisi nhaka anotevera mibayiro uye mibayiro:
Akagamuchira mubayiro "Crystal Rose" muna 1993 kuti kutora chikamu mune mutambo "Nijinsky".
Actor akanga paakavapa muna 1994 ari category "Best Actor" iri firimu "Bashmachkin".
Alexander muna 1994 akunda "Golden Mask".
Muna 1995, kuti mutambi ane yemitambo mabasa vakagamuchira mubayiro ainzi Smoktunovsky.
Muna 2003, nokuti zvakanaka mutambo muchinangwa nomination "The kunyemwerera M", akanga paakavapa "The Gaviota."
Muna 2005 akanga paakavapa mubayiro unokosha kubva Longines uye Eurotime makambani.
Alexander Feklistov - guru nyanzvi mutambi. Muupenyu, hachisi zvishoma kunakidza pane pachikuva kana chidzitiro. Iye hwakabatikana upenyu, wakafuma nemanzwiro. Kunyange zvakadaro, akadzora, vanhu vakangwara, vanhu vakadaro vari ikozvino isingawanzowanikwi.
Top uchinzvera: apo "hwamanda zvinoda"
"In nyama." Vatambi serials, Zombie mutambo
Kwepfungwa akasarudza kuisa diagnoses vatambi "Game of Zvigaro zvoumambo". Chii akauya nezvazvo?
Actor Yuri Kuzmenkov: Biography, upenyu hwomunhu. Top mafirimu
Movies Crazy: Pamazita
Vanhu Artist of USSR Constantine Stepankov - the ngano of sinema yeSoviet
Chii Cod uye chii ayo zvakanakira nekuipira
Gastro - kurapwa, zviratidzo.
Kana zvichiita kuchinja opareta rarinoshevedzwa nhamba?
Kugadzirira zororo racho: iyo makwikwi zvinogona kuitwa pamusoro mwana zuva rokuberekwa
Welfare basa - chii ichi? Kunyatsogona Correctional
Sei wemagaka zvinovava
The master cylinder of the clutch. "Gazelle": chigadziro uye kugadziriswa kwetenzi cylinder ye clutch
Semi-vemutungamiri hurongwa - pfungwa uye unhu
Sergei Kornilenko: nhabvu Biography
STALKER: spavner nokuti "Vanhu Russian thistle"
Unoziva sei kuti pazvidya ako uye magaro akanaka uye nakachany?
Turret Syndrome: Zviratidzo neMarapirwo Nzira